Nwunye Worldwa - WRSP
ỤWA NA-AWỤ ỤWA
1934: Uematsu Aiko mụrụ.
1951 (March 18): Handa Haruhisa (aka Fukami Seizan [ruo 1994] wee mesịa Fukami Tamishū) mụrụ na Hyōgo Prefecture.
c. ihe 1960: Handa Shihoko, nne Fukami, sonyeere Sekai Kyūseikyō wee malite ịga leta Fukami na chọọchị obodo ya.
c. ihe 1966: Fukami natara n'aka Sekai Kyūseikyō an ọ bụ ihe eji etinye aka, nke nyere ya ikike ime emume a na-akpọkarị ebe a .
c. ihe 1970: Fukami nwere ezigbo mmasị na, wee gbanwee, Oomoto.
1976: Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Dōshisha na Kyoto, Fukami malitere ọrụ dị ka onye na-ere ahịa na Tokyo, wee bido ileta ụlọ ọrụ Japan nke nzukọ ọrụ enyemaka China World Red Swastika Society.
1977: Fukami zutere Uematsu na ụlọ ọrụ Japan nke World Red Swastika Society.
1978: Uematsu guzobere ụlọ ọrụ Misuzu Corporation, Fukami guzobere Misuzu Gakuen ụlọ akwụkwọ nkwado dị ka akụkụ nke azụmaahịa ya.
1984: Uematsu na Fukami guzobere òtù okpukpe Cosmo Core.
1985: Cosmo Core gbanwere aha ya na Cosmo Mate.
1986: Fukami bipụtara akwụkwọ ya kacha ere Kyōun (Ochioma).
1989: Fukami guzobere onye nkwusa Tachibana Publishing.
1991: Fukami guzobere ụlọ ọrụ ndụmọdụ BC Consulting.
1993: formermụ nwanyị abụọ bụbu ndị otu Cosmo Mate gbara Fukami akwụkwọ maka mbibi na Machị, na-azọrọ na ya mere omume rụrụ arụ na ha, wee banye nhazi na Disemba nke afọ ahụ.
1994 (Eprel): Cosmo Mate gbanwere aha ya na Ike Cosmo Mate.
1994 (May na June): Ndị òtù mbụ gbara Fukami na Powerful Cosmo Mate ebubo maka mmebi na May na June n'otu n'otu, na-azọrọ na ya na ndị otu ahụ riri ha nnukwu ego.
1994 (Disemba): Ike Cosmo Mate gbanwere aha ya na World Mate.
1994: International Shinto Foundation (ISF, New York) na Shinto Kokusai Gakkai (International Shinto Studies Association [nke a na-akpọbu International Shinto Research Institute], Tokyo).
1995: World Mate malitere ijide shingyō kokubö nzukọ, nke ebumnuche iji nye ikike nchekwa mba Japan.
1996 (Eprel): World Mate gbara gọọmenti Shizuoka Prefecture maka ịghara ịnabata akwụkwọ maka mmegharị maka ndebanye aha n'okpuru Iwu Okpukpe.
1996 (Mee): officelọ ọrụ ụtụ isi Ogikubo dị na Tokyo nyere ụlọ ọrụ Cosmo World ntaramahụhụ ụtụ isi, nke ụlọ ọrụ ụtụ isi kwuru na ọ jikọtara World Mate.
1996: World Mate nyere ego maka ịtọlite, ma na-arụ ọrụ, hanlọ Ọgwụ Silọ Ọgwụ nke Sihanouk, dị ka World Mate na Fukami kwusiri ike na-eme ebere na ọrụ ebere na Cambodia mgbe nke ahụ gasịrị.
1997: Fukami gụsịrị akwụkwọ nna ya ukwu na olu Musashino Academia Musicae, kọleji nke Japan.
2001: World Mate na Fukami gbara akwụkwọ mkparị megide Eeh onye nkụzi bụ Okouchi Toshiteru na onye bipụtara magazin ahụ psiko. Ha mekwara ka ha kwuo na ha ga-emerụ onwe ha megide ndị odeakụkọ na-enye aka na onye bipụtara magazin ahụ Cyzo.
2002: weebụsaịtị Wāruto Meito Higai Kyūna Netto ワ ー ル ド メ イ ト 被害 救 済 ネ ッ ト (aha ya nke asughariri dika “webusaiti nke na acho iji kwado ndi n’emebi nsogbu nke World Mate”) gbara ndi oka iwu na ndi nta akuko.
2005 (Jenụwarị): Fukami biliri n'ọnọdụ onye isi oche nke Shinto Kokusai Gakkai.
2006 (Mee): Na Courtlọikpe Kasị Elu nke Tokyo, World Mate nwetara ngbanwe nke ntaramahụhụ ụtụ isi nke ụlọ ọrụ ụtụ isi Ogikubo tụbara na 1996.
2006: Fukami natara dọkịta nke akwụkwọ na Mahadum Tsinghua na China.
2007: Fukami nwetara Doctor of Literature na Chinese Classic Literature ogo na Mahadum Zhejiang na China.
2008: E guzobere Worldwide Support for Development (WSD), otu na-abụghị uru na-akwado Fukami.
2010: World Mate bụ onye nke ise kachasị nyere onyinye (yana nke kachasị n'etiti òtù okpukpe) nye ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị otu Nri.
2012: World Mate nwetara asambodo dị ka ụlọ ọrụ okpukpe site n'aka Minista Mmụta, Omenala, Egwuregwu, Sayensị na Teknụzụ nke Japan.
2013-2014: Nnọkọ Ndị ndu ụwa, nke WSD haziri, emere ya ugboro atọ.
Onye ndu mmụọ nke World Mate Fukami Tōshū 深 見 東 州 (nke a na-akpọbu Fukami Seizan 深 見 青山), onye onye aha ọmụmụ bụ Handa Haruhisa 半 田 晴 久, [Foto dị n'aka nri] ka a mụrụ na Hyōgo Prefecture na 1951. N'oge ahụ nna ya, Handa Toshiharu, ka bụ nwa akwụkwọ mahadum na-arụsi ọrụ ike na mmegharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ekpe. Dabere na kọlụm Fukami bipụtara na weebụsaịtị World Mate, nne ya Shihoko, afọ atọ karịa Toshiharu, bụ onye ikwu nke nna Toshiharu (ya bụ nna nna Fukami).
Ọ na-esiri Toshiharu ike inweta ọrụ na-adịgide adịgide n'ihi ndọrọndọrọ ọchịchị ya, yabụ enweghị ike ịlekọta Shihoko na Fukami. Dabere na Ōhara (1992), na mgbakwunye na nsogbu nsogbu ego a, mmụọ mpako ya na ime ihe ike megide Shihoko nyere ya nsogbu nke ukwuu. N'ihi ya, ọ sonyeere Sekai Kyūseikyō 世界 救世 教, otu n'ime ndị Shinto kasị ukwuu na Shinto NRMs (mmegharị okpukpe ọhụrụ), na-enwe olileanya na Toshiharu ga-akwụsị ime ihe ike ezinụlọ ya.
Ọ na-aga eleta Fukami ụka dị na Kyūseikyō na-agakarị, bụ nke mere ka ọ jiri nwayọọ nwayọọ nwekwuo okwukwe n'okpukpe ahụ. Mgbe Fukami dị afọ iri na ise, e nyere ya otu ọ bụ akara nkedo site Kyūseikyō; iri na ise bụ afọ ọhụụ maka inye onyinye a na ndị otu. Dị ka Kyūseikyō si kwuo, oge ahụ na-eme ka onye na-ejide ya mee ihe ebe a, ihe na-agwọ ọrịa nke ime ka mmụọ nsọ dị ọcha site na ịcha ìhè nke Chineke (ọ bụ) si nkwụ.
Ọ bụ ezie na Shihoko kwenyesiri ike na uru nke ọgwụgwọ nke ebe a , ọ tara ahụhụ a na-amaghị onye ọ bụ, ajọ ọrịa n'akụkụ njedebe nke 1960s, mgbe Fukami bụ nwa akwụkwọ sekọndrị. Ọ rịọrọ otu onye agadi nke Oomoto 大本 ka ọ wepụ ihe ime mmụọ kpatara ọrịa ya (Isozaki 1991; Ōhara 1992). Oomoto bụ Shinto nke Shinto nke na-ekwusi ike banyere ọgwụgwọ, nke Okada Mokichi, onye guzobere Kyūseikyō, nọ na ya tupu ya amalite usoro ya. Shihoko mechara gbakee n'ọrịa ya. Mgbe ahụ Fukami gara Matsumoto Matsuko, nwanyị nwere ọgụgụ isi nke Oomoto, onye, ​​nke o kwuru, dugara ya ịmara na ọnụnọ nke kami ma ọ bụ chi. Mgbe ọ gụsịrị University University nke dị na Kyoto na 1972 (Yonemoto 1993; Hasegawa 2015), ọ malitere itinye aka na Oomoto.
Fukami nwetara akara na Economics na Dhaka na 1976 wee malite ịrụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na Tokyo. Ekem enye ama aka ufọkutom Japan emi ẹkenamde utom ukpepn̄kpọ China emi ẹdude ke World Red Swastika Society, emi ẹdude ke Tao-yuan esop ido ukpono. Ugbua Red Swastika Society ka ya na Oomoto na ndi ozo no na 1920. N'ime ụlọ ọrụ Japan ya dị na Tokyo, Fukami gosipụtara ikike pụrụ iche dika marawa , onye na-ekwu okwu gbasara ime mmụọ ma ọ bụ onye ntụgharị okwu nke na-azọrọ na ya nwere ike ikpe ikpe ziri ezi na ọdịdị nke okwu Chineke nke ndị na-ajụ ase natara. Mgbe ahụ, dịka Ishizaki (1991) na Ohara (1992), Su no Kami Chineke kachasị elu, onye kwenyere na Kyūseikyō bụ onye kere eluigwe na ala, gwara Fukami ka o jiri onwe ya na-efe Chineke (kami no michi) ma gwa ya na onye ga-abịa ịhụ ya n'ọdịnihu dị nso; Fukami kpebiri ịkwụsị ọrụ ya ma mee ka mmekọrịta ya na Red Swastika Society dịkwuo ná mma.
Na 1977, otu nwanyị aha ya bụ Uematsu Aiko 植 松 愛 子 (nke a na-akpọbu Tachibana Kaoru) gara leta ụlọ ọrụ ndị Japan nke Red Swastika Society. Ọ bụ onye ahụ Chi gwara Fukami maka ya, maka na Chineke gwara Uematsu na otu nwa okorobịa ga-abịa ịhụ ya n'oge na-adịghị anya. Uematsu, nke amụrụ na 1934, bụbu onye otu Mahikari 真 光 (Yonemoto 1993), nke Okada Kōtama, bụ onye na-eso ụzọ Sekai Kyūseikyō guzobere na 1959. Mgbe nne ya nwụsịrị mgbe Uematsu gbara iri atọ na atọ, ya, Fukami na-ekwu, natara mkpughe nke Chineke nke gwara ya ka ọ zụọ mkpụrụ obi ya site na ọrụ ụlọ na duru ụmụ nwanyị. Uematsu wee hazie ụlọ akwụkwọ nkeonwe maka emume tii, nhazi ifuru, na ime ihe ụtọ (Ōhara 1992), nke bụ omenala ụmụ nwanyị na Japan. Mgbe o zutere Fukami, ụlọ akwụkwọ ya ji nwayọọ nwayọọ ghọọ obere okpukpe, nke nwere ihe dị ka mmadụ iri abụọ (Yonemoto 1993).
Ka ha na-ezukọta n'ụlọ ya na Ogikubo mpaghara Tokyo, Uematsu, onye Tsugamura Shigerō, onye ụkọchukwu patent na onye òtù mbụ nke Mahikari (Yonemoto 1993), kwadoro ụlọ ọrụ Misuzu Corporation na 1978. Otú ọ dị, n'ụzọ dị irè, Fukami bụ ike na-arụ ọrụ n'azụ ụlọ ọrụ ahụ. N'afọ ahụ, ọ kwadoro Misuzu Gakuen み す ず 学门, ụlọ akwụkwọ na-akwadebe maka ndị nwere ike ịbanye na mahadum dị elu. N'ikpeazụ, ọ gara n'ihu ịga akwụkwọ a, bụ nke a mara n'etiti ụmụ akwụkwọ sekọndrị na Tokyo.
Ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ na azụmahịa, Fukami nọgidere na-etinye aka n'omume okpukpe Uematsu. Na 1984, ha guzobere òtù okpukpe Cosmo Core, bụ nke a na-ewere na mbụ bụ World Mate. Na 1985, ha gbanwere aha ya Cosmo Mate. Na 1986, Fukami bipụtara akwụkwọ ise dị n'okpuru pseudonym Fukami Seizan, bụ nke mere ka profaịlụ ya dị ka onye ndú nke usoro ahụ. Akwụkwọ nke abụọ ya Kyōun A na-akpọ (Fukami 1986b), nke isiokwu ya na-asụ Bekee Onu Ochioma, [Foto na nri] rere nke ọma (Dị ka akwụkwọ akụkọ Tachibana, ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ na 1989 site na Fukami, ihe karịrị akwụkwọ 1,700,000 ka e rerela). N'ihi ya, Cosmo Mate gosipụtara uto ngwa ngwa site na njedebe 1980s na mmalite 1990s. N'oge a, ụfọdụ NRM ndị ọzọ, dị ka Aum Shinrikyō na Kōfuku no Kagaku, malitere ịrụ ọrụ na Tokyo na ha, yana Cosmo Mate, bịara na-ahụwanye ma hụ mmasị na mgbasa ozi ọha na eze. Dịka ọmụmaatụ, na mbipụta January 1993 ya, Bungei Shunj ū , bụ otu n'ime magazin ndị kasị ewu ewu, na-emepụta ihe n'echiche na Japan, họtara mmadụ iri ise na-eme mgbanwe site na mpaghara dịgasị iche iche, abụọ n'ime ha bụ Fukami na Aum, bụ Asahara Shōkō.
Otú ọ dị, mgbe nke ahụ gasịrị, ọganihu nke uto nke Cosmo Mate belata n'ụzọ bụ isi n'ihi ọtụtụ ikpe ndị otu ma ọ bụ ndị bụbu ndị otu wetara megide Fukami na 1993 na 1994 na-ekwu, dịka ọmụmaatụ, iyi egwu mmekọahụ na omume aghụghọ. Ọzọkwa, na Disemba 1993 na na Machị 1994, Tokyo Regional Taxation Bureau, na-enyo enyo ịtụ ụtụ isi, duziri nyocha nke ụlọ ọrụ Cosmo Mate (nke dị nso, ihe dị ka 1995, gbanwere aha ya na Cosmo World wee mesịa aha ya ugbu a bụ Nihon Shichōkaku -sha 日本 視 聴 覚 社), na-azọrọ na ụlọ ọrụ a metụtara nzukọ okpukpe Cosmo Mate. Nke a mekwara ka ụdị mmegharị ahụ ka njọ. Cosmo Mate (dika nzukọ okpukpe) gbanwere aha ya ka ọ nwee ike Cosmo Mate na Machị 1994, wee bido World Mate na Disemba nke afọ ahụ.
Fukami gbanwere aha ya site na Seizan gaa T toshū na 1994. N’otu afọ ahụ ọ malitere ịchụso agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ na okpukpe ndị Japan na China. Na Disemba 1994, Fukami guzobere International Shinto Foundation (ISF). Organizationtù a na-enweghị ego akwalitela ọmụmụ Shinto, ọkachasị na Japan, na-achọ ọkachasị ịkwalite echiche Fukami banyere ihe ọmụmụ Shinto kwesịrị ịbụ (Antoni 2001). Fukami enyela nnukwu onyinye na mahadum na kọleji na mba ofesi, gụnyere oflọ Akwụkwọ nke Oriental na African Studies na London na Mahadum Columbia na New York. Enweela ya ọtụtụ asọpụrụ na nleta prọfesọ na ogo. Ọzọkwa, kemgbe mid-1990s, Tachibana Publishing, nke Fukami na-agba, lekwasịrị anya karịsịa na mbipụta akwụkwọ na Zen na Confucianism a ma ama. Ọ bụ ndị ọkà mmụta Japan dere ma ọ bụ dezie ọtụtụ n’ime akwụkwọ ndị a. Na 2006, Fukami nwetara akara ugo mmụta dibịa bekee na Mahadum Tsinghua dị na China. Na 2007, Tachibana Publishing bipụtara usoro mmụta doctoral ya, Bijutsu ka Shijō 美術 と 市場 (Fine Arts na Market). Nakwa n'afọ ahụ, Fukami nwetara akara nke Doctor of Literature na klas nke ndị na-ahụkarị na Chinese na Mahadum Zhejiang na China.
Na mgbakwunye na ọmụmụ ihe ọmụmụ, Fukami anọwo na-esikwuwanye ike na ihe omume site na 1990s. Ọ rụrụ dị ka onye na-agụ egwú na onye na-agụ egwú, onye nduzi, onye na-ede egwú, onye dere ya ụgbọ na haiku poetry, calligrapher, nna, Eeh omee, onye na-agba ballet, na onye na-eme ihe nkiri n'oge a. Na 1997, Fukami dechara usoro nna ya ukwu na olu Musashino Academia Musicae, kọleji nke ndị Japan. O nwere ikikere ikuzi Eeh na-egwuri egwu maka Ụlọ Akwụkwọ Hōshō, ememe tii maka ụlọ akwụkwọ Edo Senke Shinryū, ndokwa maka okooko osisi maka ụlọ akwụkwọ Saga Goryū, na akwụkwọ ndị Japan na-akpọigraphy. Fukami enyewo ụdị ọrụ nka ọ bụghị naanị na ndị òtù ụwa ma ọ bụ ndị ọha na eze. Na 2009, Fukami nwetara akwụkwọ na-ede akwụkwọ nke ndị mmadụ na Ụlọ Akwụkwọ Julliard na New York. Na 2014, o gosipụtara oku na Japanese, ụdị ihe odide ederede na nnukwu fude Yellow (ahịhịa), na British Museum na London.
Ọzọkwa, Fukami emeela nkwupụta amụma banyere nsogbu na-abịanụ nke o kwuru ga-eme na Japan n'ọdịnihu dị nso, ma mesie mkpa ọ dị igbochi nke a. Na February 1995, otu ọnwa mgbe oke ala ọmajiji nke Hanshin-Awaji nke Jenụwarị, na tupu ọgụ Aum Shinrikyō wakporo usoro ụgbọ oloko Tokyo na Machị, World Mate mere shingyō kokubö Ings 神 業 nzukọ, ma ọ bụ nnọkọ maka emume Shinto nke enyere iji chebe nchekwa mba Japan. Ndị a sitere na ozi mmụọ nke Fukami kwuru na ya natara n'aka nwanyị onye nchoputa Oomoto, Deguchi Nao, na Japan ga-enwe nsogbu ga-abịanụ. Na njedebe nke 1990s, shingyō kokubö a weere ya dịka otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa n'ime njem ahụ.
N'afọ ndị mbụ nke narị afọ a, World Mate malitere nzube nke ịkwado ọchịchị gọọmentị ụwa na Japan site n'afọ 2020, n'ihi na Fukami kwadoro na Japan, dịka ebe ime mmụọ nke ụwa, ga-arụ ọrụ dị oke mkpa n'inweta udo ụwa. Dịka Fukami si kwuo, ọ gwụla ma ọchịchị Gọọmenti Ụwa a ghọtara, Ọ dịghị ihe ọ bụla (Age nke Miroku) ma ọ bụ Paradaịs n'ụwa, agaghị abịa. Otú ọ dị, ọ hapụrụ ihe mgbaru ọsọ nke 2020 hiwere Gọọmenti. Ọ na-atụ egwu na ọ bụrụ na ọ gbalịa iwepụta atụmatụ a, ọ ga-eweta ajọ ọdachi na ọdachi ndị na-akpata ọdachi na ọnụ ọgụgụ ọnwụ nke chi dị iche iche na-achọ iji nyere aka na nhazi nke ọchịchị a.
Na akụkụ mbụ nke 1990s, World Mate amawo iwu ịdenye onwe ya dika iwu shūkyō hōjin 法人 (ụlọ ọrụ okpukpe) n'okpuru iwu 1952 Religious Corporation. Ọ mere ka gọọmenti nke Shizuoka Prefecture, ebe isi ụlọ ọrụ ya dị. Otú ọ dị, n'ebe a, gọọmentị anabataghị ngwa ahụ, n'ihi na o kwenyesiri ike na ihe omume nke World Mate, nke a na-ewere na ya na ụlọ ọrụ ahụ bụ Nihon Shichōkaku-sha, bụcha okpukpe (dika Asahi Shimbun, April 19, 1996, mbipụta Shizuoka; Shizuoka Shimbun, May 17, 1996, mbipụta nke mgbede).
Ọzọkwa, na mmalite 2000s, World Mate nwere ọtụtụ ebubo. Site na ngwa ngwa nke Ịntanetị n'oge ahụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị onwe ha kọwara, ndị nọ na mbụ na-arụ ụka na megide World Mate na Fukami n'ime ebe nrụọrụ weebụ. Dịka ọmụmaatụ, na 2002, ọtụtụ ndị nta akụkọ na ndị ọkàiwu kwalitere ebe nrụọrụ weebụ na-awakpo mmegharị ahụ n'ihi ndị ahụ, na-ekwu na ha kpatara mmebi iwu n'aka World Mate. Ọ bụ ezie na World Mate kwuru na ya na-ata ahụhụ ọtụtụ ụkọ akụkọ na nrọ na Intanet, ebubo ndị a na-emerụghị emerụ.
Ka o sina dị, mgbe emechara ngwa, na 2012 World Mate nwere ihe ịga nke ọma n'inweta asambodo dị ka ụlọ ọrụ okpukpe site na Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịbendị (ngalaba dị na Mịnịstrị nke Mmụta, Omenala, Egwuregwu, Sayensị na Teknụzụ nke Japan na-ahụ maka ịhazi ụlọ ọrụ okpukpe). Enwere obere ozi a tụkwasịrị obi banyere ihe kpatara eji kwado World Mate dị ka ụlọ ọrụ okpukpe na afọ ahụ. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịbụ na, n'ihi mkpebi Courtlọikpe Kasị Elu mere na May 22, 2006 na Nihon Shichōkaku-sha enweghị njikọ na World Mate (Handa 2006), a bịara hụ ọrụ mmemme ahụ dị ka okpukpe.
Enwere aro ụfọdụ na Shimomura Hakubun, onye bụbu Onye Minista nke Education, Culture, Sports, Science and Technology, nwere ike ịbụ na o nwere mmetụta na mkpebi nke Cultural Affairs Agency. Nke a, ma ọ dịkarịa ala, bụ ihe kpatara azịza ahụ kpatara na mbipụta April 16, 2015 nke Shūa Bunshun, magazin a na-enwe kwa izu na otu n'ime nnukwu mgbasa ozi na Japan. Magazin ahụ kwuru na ụlọ ọrụ ndị Fukami guzobere, gụnyere Tachibana Publishing, enyela yen atọ dị na Shimomura na 2005, otu afọ mgbe Shimomura na-eje ozi dịka Minista (Monbu Kagaku Daijin Seunukan Or 部 科学 大臣 政務) ma ọ bụ dị ka odeakwụkwọ Omeiwu maka Mmụta, Omenala, Egwuregwu, Sayensị na Teknụzụ. Magazin ahụ kwukwara na World Mate nyere Shimomura onyinye nde yen atọ na 2009. Nyere na akwụkwọ akụkọ kwa izu na Japan nwere aha ọma maka iji isi mmalite ndị na-enyo enyo maka akụkọ ha na ọ bụghị mgbe niile ka a ga-atụkwasị obi, a na-ekwupụtaghị nkwupụta ndị a. Agbanyeghị, ha atụnyela ụtụ na nghọta sara mbara, nke ọtụtụ akụkụ mgbasa ozi na-agbasa, na ihe omume World Mate nwere ike ọ bụghị nanị n'akụkụ nke usoro okpukpe.
Mgbe o debanyere gọọmentị dịka ụlọ ọrụ okpukpe na 2012, World Mate, Fukami Tọọshị, na-eme ka ọhụhụ ya dịwanye mma site n'ịnye mgbasa ozi dị egwu nke akwụkwọ ya na ihe omume na akwụkwọ akụkọ mba. Na mgbakwunye, n'ime afọ ndị gara aga, World Mate na-arụsi ọrụ ike inye ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mkpa (Hasegawa 2015), ebe Fukami mesiri ike ịkpọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ka ha hụ ihe dịgasị iche iche na-elekwasị anya na ya. Ọ bụ ezie na World Mate amaghachitere atụmatụ ya iji guzobe ọchịchị Gọọmenti Mba Ụwa na Japan, o yiri ka ọ mepụtara iwu nke ịchọ ịkwalite mmetụta ya na ụwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị Japan.
Onye na-eto eto ụwa kwuru onwe ya na ọ bụ usoro Shinto. Ka o sina dị, onye ndú ya, bụ Fukami Tọọsh, na-egosi mmasị n'ebe okpukpe dị iche iche dị, gụnyere ọ bụghị nanị Shinto kamakwa Buddha na Confucianism, dị ka ọ dị n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ tọrọ ntọala NRM nke Japan. Ozokwa, o bipụtawo ọtụtụ ebe na ọtụtụ isiokwu si n'okpukpe gaa n'ọgba afa, azụmahịa na njikwa, agụmakwụkwọ, ndị omekọtara, romances, na nkà ọma. Ya mere, o siri ike ikwu nkọwa ya n'ụzọ doro anya.
Otú ọ dị, n'ọtụtụ n'ime akwụkwọ ndị a, gụnyere ndị yiri ka ha enweghị okpukpe, Fukami ekwusiri ugboro ugboro na ọ bụla n'ime ihe omume anyị kwa ụbọchị kwesịrị imezu dị ka shingyō 神 業, ma obu omume Chukwu nke mmadu puru iji zụọ nkpuru obi ya, na onye puru inweta udi uba nke obi ya site na omume ndia. N'ezie, World Mate agbaala ndị na-eso ụzọ ume ime omume nke shingyō na ịghọta ihe ọ pụtara.
Dị ka Fukami si kwuo, akụnụba mmadụ na-adabere karma (in'nen 縁) nke ma onye ma nna nna ya ma / ma obu onwe ya na ndu mbu. Ọ na-ekwukwa na a mụrụ mmadụ n'ezinụlọ nke ọma n'ihi na mmadụ mere ọtụtụ ọrụ ọma iji zọpụta ndị ọzọ na ndụ ya gara aga (Fukami 1986a). N'aka nke ọzọ, ndị na-ewere na ha enweghị isi, Fukami na-arụrịta ụka, kwesiri iburu n'uche na omume ha na-ezighi ezi na ndụ ha mbụ butere ọdachi ha n'ụwa a. Fukami, ya mere, na-atụ aro na ka ha nwee ọganiihu, ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị imebi njikọ ha na karma ọjọọ ha (Fukami 1986a).
Ndị Japan NRM na-emepekarị echiche oge ochie nke karma n'ụzọ nke gosipụtara etu omume ya si dị (Kisala 1994). N'ebe a, echiche Fukami banyere karma abụghị ihe omimi n'etiti ndị Japan NRM. Ọ na-ekwusi ike na ebe ọ bụ na karma dị na uche na omume mmadụ, ndị mmadụ kwesịrị ịgbanwe onwe ha ka ha pụọ ​​na karma ọjọọ ha (Fukami 1987). Bestzọ kachasị mma iji belata karma ọjọọ mmadụ bụ ịzụlite omume ọma site na imechitere ndị ọzọ.
Agbanyeghị, iji bepụ karma ọjọọ mmadụ, dị ka Fukami si kwuo, mmadụ kwesịrị ọ bụghị naanị ịzụlite omume ọma kamakwa ife ndị nna nna ya ofufe. N'etiti Ọgọst ọ bụla, World Mate, n'agbanyeghị na ọ bụ okpukpe Shinto, na-eme emume ncheta Buddha maka ndị nna nna ndị otu ya, nke a na-akpọ go-senzo tokubetsu kwa-hōyō 先祖 特別 大法 要, na-elekwasị anya n'ememe anwansi Fukami na-eme maka ebumnuche nke ịchekwa, ma ọ bụ imezigharị, mmụọ nke ndị nna nna ochie sonyere na karma ọjọọ ha. Echiche dị otú a nke ike mgbanwe nke karma site na ofufe nke ndị nna ochie na-esitekarị n'ọdịnala okpukpe ndị Japan ma ọ bụghị site na Buddha.
World Mate na-ahụ ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke ndụ mmadụ dị ka inweta ọnọdụ nke shinjin gōitsu 神 人 合一, ma ọ bụ ịdị n'otu na kami ma ọ bụ chi. Fukami (1987) na-ekwu na, n'adịghị ka mmekọrịta dị n'etiti Chineke na ụmụ mmadụ nọ n'okpukpe ndị Juu, Iso Ụzọ Kraịst, na Islam, ụmụ mmadụ nwere ike inwe mmekọrịta enyi na chi dị iche iche na mba ụwa nke Japan. Iji nweta ọnọdụ nke ịdị n'otu na kami, ọ dị mkpa ịnọgide soro ha na-enwe ezi mmekọrịta site n'ịzụlite omume ọma, n'ihi na chi dị iche iche n'ụdị omume ọma mmadụ. Dị ka Fukami (1986b) si kwuo, ka osi dị, ọtụtụ ndị Japan nwere echiche na-ezighi ezi nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị shugyō A chọrọ ka a na-eme ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ị ga-eme kami. Ọ na-azọrọ na agbụrụ ndị okpukpe na-eme ka ndị mmadụ ghara inwe ikike nke anụ ahụ ha ma mebie ume nke mkpụrụ obi ha, nakwa na ndị na-eme onwe ha shugyō na-eme ka mmụọ ọjọọ nwee mmụọ gị. Fukami na-akpọ ụdị ụdị mmega ahụ kōten no shugyō 後天 の 修行 (na-eto eto), mgbe ọ na-atụ aro ime ezigaghi shugyō 先天 の 修行 (omume nke ihu) nke mmadụ na-enwe mmasị kami (Fukami 1986b; 1986c).
By ezigaghi shugyō, Fukami pụtara na ị na-erube isi n'ụkpụrụ omume kwa ụbọchị makoto 誠 (ezi obi), nke na-agwa ndị mmadụ ka ha ghara ịbụ ndị achọghị ọdịmma onwe ha naanị ma ghara inwe anyaukwu (mushi muyoku 無私 無欲) (Fukami 1986c), na, na okwu ndị ọzọ, iji nyefee onwe ha kpamkpam n'ijere ndị ọzọ ozi ma na-eme ihe ndị ọzọ na-achọ ịme. Fukami na-ele omume ịme onwe ya anya, gụnyere ọ bụghị naanị shugyō na Buddha kamakwa misogi 禊 (ọrụ oyi nke mmiri) na Shinto, dịka ihe efu. Dị ka ya si kwuo, ndị mmadụ na-achọta ihe siri ike karite inweta (ego 徳) site na omume ndị a na-eche nanị banyere onwe ha, karịa ịrụsi ọrụ ike maka ndị ọzọ na ndụ ha kwa ụbọchị. Ihe ndị a bara uru na ụwa ime mmụọ mgbe mmadụ nwụsịrị na ọnụ ọgụgụ ndị ruru eru ghọrọ ihe dị mkpa na-egosi ma ọ bụ onye zitere ya kami gaa n'eluigwe ma ọ bụ hel.
Ụwa ime mmụọ bụ ebe ụmụ mmadụ na-eme mgbe ha nwụsịrị ma pụọ ​​na ụwa a. O nwere ato ato: heaven, hell, na chūyū reikai 中 有 ♠ 界, nke dị n'etiti eluigwe na hell (Fukami 1986a). Echiche dị otú a banyere ụwa ime mmụọ yiri nke mmegharị ahụ, Oomoto na Sekai Kyūseikyō, na Fukami tinyere ya.
Mpaghara nke onye nwuru anwu na-adabere n'ihe onye ahu mere n'ime uwa a. Fukami (1986a) na-egosi ọnọdụ ndị nwụrụ anwụ nwere ike ịrịgo n'eluigwe. Obodo eluigwe, dịka Fukami si kwuo, nwekwara mpaghara atọ. Onye kasị ala bụ ebe ndị raara onwe ha nye ndị ọzọ nọ n'ụwa a, ma ọ bụ ndị gosipụtara ezi obi eziokwu site na omume nke taise 体 施, nkwụsị 物 施, na hosse 法 施 (ntụgharị ọrụ afọ ofufo, onyinye ihe onwunwe, na mmụta okpukpe). Obodo kachasị elu gụnyere ndị na-abụghị nanị na-arụsi ọrụ ike n'okpukpe kamakwa ndị nwere akụnụba, ma ọ bụ ndị jiri akụ na ụba ha mee ihe maka ọdịmma nke ọha mmadụ site na ezi okpukpe ha na ndị na-arụ ọrụ dị mma nke ọnọdụ ha na nsọpụrụ dịka ụzọ isi zọpụta ndị ọzọ.
Ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ, dị ka Fukami si kwuo, agaghị ekwe ka ha rịgoo n'eluigwe ma bụrụ ndị a na-ezigara chūyū reikai, ógbè ahụ maka ndị na-arụtụghị ọrụ rụrụ arụ ma ọ bụ dị egwu; Ya mere, ndị nwụrụ anwụ na chūyū reikai, dị ka ndị nkịtị na ụwa ime mmụọ. Hel gụnyere ndị na-eme ọtụtụ ihe ọjọọ n'ụwa a ma nwee ọtụtụ ebe, nke ọ bụla kwekọrọ n'ụdị omume ọjọọ ahụ onye nwụrụ anwụ mere n'ụwa a. Ọ bụrụ na onye nwụrụ anwụ nọ na hel gbanwechara ụzọ ya, onye ahụ nwere ike isi na ya pụọ.
Dị ka Fukami (1987) si kwuo, ndị bara ọgaranya yiri ka ọgaranya n'ụzọ ime mmụọ kwa. Fukami (1986b) kwuru na uru ihe onwunwe mmadụ na ụwa a bụ isi mmadụ, kama ịbụ mbọ mmadụ na-akpata ego. Ọzọkwa, ọdịmma mmadụ na-egosipụta ogo karma mmadụ kpatara site na ọzụzụ mkpụrụ obi mmadụ na ụwa gara aga. Yabụ, ndị mmadụ n'ụwa a kwesịrị ịzụ mkpụrụ obi ha iji melite ogo nke kama ha nke ga-emetụta ndụ ha n'ụwa ọzọ. Maka ebumnuche ndị a, Fukami gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha zụọ mkpụrụ obi ha ka ezigaghi shugyō (omume ihu igwe) site n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche kwa ụbọchị na ụwa dị adị.
N'ihi ya, Fukami na-ele anya n'ịchọ ihe ịga nke ọma n'ụwa a dị ka ụdị ọzụzụ mkpụrụ obi nke na-eduga n'ịdị mma na ogo nke karma mmadụ. Ya mere, Fukami, onye bụkwa onye isi oche nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na onye na-ahụ maka azụmahịa, na-ekwusi ike mkpa ọ dị inweta akụ na ụba dị ka mmụọ. Kinddị echiche a dị ka nke Ōkawa Ryūhō, onye guzobere Kōfuku no Kagaku, onye na-elekwasị anya n'inweta akụ na ụba n'ụwa a dịka usoro ọzụzụ mkpụrụ obi, na onye na-ekwusi ike na ndị na-enweta nnukwu ihe ịga nke ọma n'ụwa a bụ yikarịrị ka a ga-eziga ha n'eluigwe na ụwa ọzọ.
Ọzọkwa, dị ka World Mate si kwuo, Fukami bụ onye na-enye nkwado, onye nyere onyinye buru ibu nye ọrụ ebere ma na-eduga ndụ dị mma. Na World Mate, Fukami na-enye ihe nlereanya maka ndị òtù ya, ndị a na-atụ anya na ha ga-arụsi ọrụ ike iji nweta ego, na iji oge na ego na-eme ihe maka ndị ọzọ.
Ihe di n'uwa bu ihe kacha mkpa n'ofufe chi di iche iche shinji 神 事, ma ọ bụ omenala Shinto. Ọ na-ahazi nzukọ maka oge niile shinji ma n'ugwu jikọtara chi dị iche iche ma ọ bụ na ebe dị nso ebe Shinto maara nke ọma. Dika otutu ndi mmadu na-aga nzuko a ma kpee ekpere n'ekpere maka chi ka ha mechie oke egwu nke, Fukami Tōshū na-ekwu, ndi mmadu nile n'uwa dum, na ndi Japan, na-eche ihu.
Isi nke World Mate shinji bụ: Setsubun shinji Ekpere 分神 事 (na February) emere na mmalite oge opupu ihe ubi, Ụbọchị Izu shingyō Ndị agha na-eme (na May) mere n'oge ezumike nke mmalite May, O-Bon shingyō お 神 神 業 (na August) nke a na-eme n'oge ezumike nke etiti August ka emetụta ememme maka ndị nwụrụ anwụ, Fuji Hakone shingyō 富士 箱根 神 業 (na October) nke dị na nso nso Hakone Shrine nso Mount Fuji, na Ọdịnihu 勢 神 業 (na Disemba), World Mate kachasị shinji ẹkenịmde ọtọn̄ọde ke utịt December tutu esịm ntọn̄ọ Jenụwarị ke n̄kann̄kụk Ise, ebiet emi mme ọwọrọetop Shinto Japan ẹwakde ẹkan.
Na ndị a shinji ezumike, Fukami na-acho ndi mmadu ka ha kpekorita ekpere ka o wee nwee ike inweta ozi sitere na chi nke ugwu ma obu ulo arusi. A na-ewere ekpere dịka omume dị oke mkpa na World Mate. A na-agba ndị òtù ọhụrụ ya ume ịga nzukọ seminare a na-akpọ shinpo gotokue nyūmon-hen 神 法 悟得 会 入門 autre, ebe a na-atụ anya ka ha mụta ụzọ dị mkpa isi na-ekpe ekpere maka chi ndị Fukami mepụtara. A na-agwa ndị na-aga ọmụmụ ihe ahụ ka ha na-ezochi ihe ndị a kụziiri ha ma ghara ịghaga ha na ndị si mba ọzọ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nọ na World Mate nwere ike ịmụta otú ha ga-esi na-ekpe ekpere nye chi, na-ekere òkè shinji ezukọta na-abụ nanị ndị na-eso ụzọ na-arụsi ọrụ ike bụ ndị na-enye ọrụ afọ ofufo, ma ọ bụ mee nleta ugboro ugboro, alaka ụlọ ọrụ nke mpaghara ahụ. Na World Mate, ọ na-esiri ndị òtù nkịtị ike ịmalite kọntaktị na ndị ọzọ na-enweghị ike ịmalite ọrụ ya; ya mere ndị nkịtị nọ na-egosi na ọ na-agwụ ike ịbanye na nnọkọ ndị dị otú ahụ nke ga-adịgide ruo mgbe chi bọrọ n'ebe dị anya site na obodo ndị mepere emepe. N'oge omume nke shinji, Fukami na-ekwusi ike na ike mkpokọta nke ndị sonyere n'ekpere adịghị ike iji nata ozi Chukwu, na-atụ aro na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị otu kwesịrị isonye na shinji. N'ọnọdụ dị otú ahụ, Fukami anaghị eche na ọ ga-eme ememe ndị a na-eme ememe ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọtụtụ puku ndị na-abịa n'ekpere ọnụ.
N'aka nke ọzọ, nzukọ ọmụmụ kwa ọnwa emere na Tokyo bụ ndị ama ama n'etiti ndị na-eso ụzọ. A na-agbasa ha na satịlaịtị na alaka ụlọ ọrụ World Mate nke mpaghara ka ndị otu wee nwee ike ịga ha na Japan niile. N'ime nzukọ ọmụmụ ihe ndị a kwa ọnwa, Fukami abụghị naanị na-ekwu okwu ihu ọha, na-enyekarị olu olu ya dịka onye ọbụ abụ, kamakwa ọ na-eme anwansi iji meziwanye ndị na-eje ozi. Ihe ndị a bụ Fukami na-ekwu, naanị ya nwere ike ịme. Ihe omuma ndi a gunyere, imaatu, dai-kyūrei 大 救 霊 (a pụrụ iche nke gūrei, nka nke izoputa ndi ojo site na nhuhu ahuhu na oku ma obu na enwegh ike iru ndị ọzọ Icha icha 仏 [na-edozi onwe ha n'ime ụwa ime mmụọ] ma na-agbanwe mmụọ ọjọọ nye ndị ọma) na kettō tenkan 転 換 (nka bu imeziwanye obara obara mmadu, nke a n’eme ka o gbanwee “mkpuru ihe mmuo”, ma obu karma nna nna ya).
Nzukọ ọmụmụ kwa ọnwa ndị a dị ka oge nke nnukwu ọ funụ, ọkachasị maka ndị na-eso ụzọ nkịtị bụ ndị chọrọ imeziwanye ọdịmma ha site na omume anwansi Fukami. Ha bụkwa oge emere maka iwebata na iwebata ndị otu ọhụrụ na World Mate. A na-atụ anya ka ndị na-eso ụzọ na-arụ ọrụ na-elekọta ndị ọhụrụ, ndị nkịtị na ndị nwere ike ịlele ọrụ ha na ime nke a n'oge nzukọ ọmụmụ kwa ọnwa dị ka ụdị ọzụzụ nke mkpụrụ obi, kama ịbụ ụdị obi ụtọ.
Na mgbakwunye na shinji mgbakọ na ọmụmụ ihe nke World Mate na-ahazi, Ọ bụghị gị 弥 栄 の 儀 na-eduzi ya n'alaka ụlọ ọrụ dị na mpaghara ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị. Iyasaka no gi bụ omenala Shinto nke ndị na-eso ya gosipụtara obi ekele ha na chi dị iche iche n'ihu ebe ịchụàjà Shinto ma kpee ekpere maka ọganihu nke ụwa, nke Japan, na ndị òtù ụwa Mate. Ọzọkwa, a na-akpọ obere ememme a na-akpọ shinshin-sai A na-edebe 振 神祭 otu ugboro n'ọnwa ọfịs ya. Ọ bụ ezie na ebumnuche nke shinshin-sai bụ ife chi kachasị elu Su, ndị otu alaka ụlọ ọrụ na-ahazi ememme ahụ, na-emeghe ọha na eze, na-agbaso, dị ka nzukọ ọmụmụ kwa ọnwa ndị a kpọtụrụ aha n'elu, na-emesi ike na ndị nwere ike, ndị ọhụrụ, na / ma ọ bụ ndị na-adịghị arụsi ọrụ ike na-eme ememe anwansi, nke, dị irè karịa nke Fukami mere onwe ya, na site n'ịkọ ọhụụ na ijide naorai 直 会, ihe oriri Shinto nke ha na-eri onyinye ha ọzọ (Mmanya Japanese osikapa) nke etinyeworo n'ihu chi.
Ọ bụ ezie na Fukami na-eme ọtụtụ anwansi dị iche iche, nke ọ na-azọrọ, na-enyere mmadụ aka iwepụ kama karma ya ma melite ihu ọma ya, ndị na-eso ụzọ World Mate na-arụsi ọrụ ike kwenyere na ọ gwụla ma ha azụlite mkpụrụ obi ha site na ịrara onwe ha nye maka ndị ọzọ, anwansi ya nkà agaghị adị oke irè maka ọdịmma ha. Na mgbakwunye, ha na-agbasi mbọ ike inweta iru eru nke ụwa na World Mate nke ahụ, Fukami na-ekwu, nyere ha aka ịme ụfọdụ anwansi, karịa ịnata ha n'aka ndị otu nọ n'ọkwá dị elu. Ọzọkwa, a na-agba ha ume ịrụ ọrụ afọ ofufo maka ọrụ nke World Mate dịka ụzọ isi zụlite onwe ha, ọkachasị maka alaka ụlọ ọrụ mpaghara ha nọ na ya. Na mgbakwunye na ọrụ ha kwa ụbọchị na ọha mmadụ na-abụghị World Mate, ha na-achọ inye aka, oge ole na ole n'izu, na ọrụ nke alaka ụlọ ọrụ ha nke World Mate, nke na-emeghekarị na mgbede na ụbọchị izu, ma na-eme afọ ofufo rụọ ọrụ maka ọrụ dị iche iche nke World Mate na ngwụsị izu. A na-agba ha ume itinye mgbalị siri ike ime ihe ndị a kwa ụbọchị, na ịhụ nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a dị ka akụkụ nke shingyō ma ọ bụ omume Chineke, nke Fukami na-ekwu na ọ bụghị nanị na-azụ mkpụrụ obi ha kamakwa ọ na-amasị ndị mmadụ n'ụzọ dị mma.
Fukami ebipụtala ọtụtụ akwụkwọ, dịka Okawa Ryūho nke Kōfuku no Kagaku na ọtụtụ ndị ọzọ mepụtara NRM, ma ya, n'adịghị ka Ōkawa, anaghị agwa ndị na-eso ụzọ ya ugboro ugboro ịgụ ha. Fukami ekwuputala na, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịgụ akwụkwọ ma na-eleta ebe nsọpụrụ, onye ọ bụla nwere ike ime nke a n'enweghị mgbalị ọ bụla, n'ihi ya, ihe ndị dị mfe (Fukami 2002) agaghị amasị chi ndị ahụ. Kama nke ahụ, ọ na-agba ndị na-eso ụzọ ya ume ugboro ugboro iji mee ihe ndị ọzọ na-achọsi ike ime, nke ga-eme ka ha nwee ume. Dị ka Fukami si kwuo, ọ mụtara echiche a site na Sekai Kyūseikyō na, dị ka usoro nke na-eme ka mkpụrụ obi ya dị ọcha, ọ kpochara ụlọ mposi nke ụka dị kwa ụtụtụ mgbe ọ na-aga ụlọ akwụkwọ sekọndrị (Ōhara 1992). Ya mere, ndị na-eso ụzọ ọmụmụ ụwa, na-agba ume ka ha jiri nlezianya na-arụ ọrụ na mpaghara ụlọ ọrụ dị na mpaghara, na ebe dịgasị iche iche nke na-eme njem.
Ụlọ nsọ Sumera- ōKami On-yashiro 皇 大 神 御 社 na-eje ozi dịka isi ụlọ ọrụ nke World Mate ma dabere na Shizuoka Ọkwá. Ọga ahụ nwekwara iri na ise Eria Honbu エ リ ア 本部 (mpaghara ma ọ bụ isi ụlọ ọrụ obodo) nke dị na nnukwu obodo dị na Japan, yana ụfọdụ alaka ụlọ ọrụ 190 gbasaa na Japan. Alaka ụlọ ọrụ ndị a na-arụ ọrụ nke ndị isi obodo ya na-eji aka ha eme ihe, mgbe Eria Honbu ma ọ bụ ndị isi ọrụ World Mate na-achịkwa ndị ọrụ World Mate. Ya mere, ọ dị ka isi ụlọ ọrụ dị na mpaghara a na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ime ka ndị isi alaka mpaghara wee ghọta, ma mekwaa iwu nke World Mate.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị òtù World Mate, dị ka weebụsaịtị ya si dị, dị ihe dị ka 72,000 (na July 2011), mana dịka Aonuma (2015), Hasegawa (2015) na Ōhira (2016) dị ihe dị ka 75,000. Enweghị ozi a pụrụ ịdabere na ya banyere ọnụọgụ ndị ọrụ dị, n'ihi na ọ dị ka ọ bụ na ụfọdụ ndị ọrụ oge niile bụ ndị ọrụ ma ọ bụ ndị otu ụlọ ọrụ nke Fukami Tōshū na-elekọta.
Ọ bụ ezie na nzukọ World Mate bụ ndị isi ụlọ ọrụ, yana Fukami na elu ya, ọ bụghị ebe etiti. N'adịghị ka nnukwu NRM ndị ọzọ nke Japan, World Mate anaghị achịkwa ọrụ nke ngalaba site na iziga ndị ọrụ ya oge niile. N’echiche a, ngalaba ya nwere nnwere onwe dị elu.
Otú ọ dị, shibu-chō 支 部長, ma ọ bụ ndị isi alaka ụlọ ọrụ, ndị a họpụtara n'etiti alaka ụlọ ọrụ, chọrọ ka ha nwee usoro nlekọta kwesịrị ekwesị iji nyere ha aka ịrụ ọrụ alaka ha nke ọma. Ha na-agbasi mbọ ike ịkwalite alaka ụlọ ọrụ ha iji rụọ ọrụ afọ ofufo maka World Mate, tinye aka shinji mgbakọ, na-arụ ọrụ ala ọzọ, na ihe ndị ọzọ. Ma ọ bụghị ya, a ga-amanye alaka ndị na-adịghị arụ ọrụ ka ha mechie ma ọ bụ ka ejikọta ha n'otu alaka kachasị nso.
Ndị òtù ụwa na-anwụ anwụ enweghị ọrụ ọ bụla iji bụrụ otu alaka ụlọ ọrụ. N'ezie, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ọ gaghị eleta alaka ụlọ ọrụ. Otú ọ dị, a na-agba ndị chọrọ ka ha tinye aka na World Matar ume ịga leta alaka ụlọ ọrụ dị na mpaghara ma sonye Enzeru-kai Angel ン ゼ ル 会 (Angel Society) ebe ahụ. Angellọ ọrụ Angel, nke na-anọghị na World Mate, nwere ndị na-eso ụzọ na-arụsi ọrụ ike bụ ndị nọ na mpaghara otu mpaghara ma bụrụkwa ndị a na-atụ anya ịrụ ọrụ afọ ofufo maka ọrụ nke World Mate, ọkachasị ndị nke mpaghara ha. Enweghị ozi gbasara ọnụọgụ ndị otu ndị mmụọ ozi dị. Na-ezo aka na ọnụ ọgụgụ ndị sonyere na World Mate isi shinji ezukọta, ihe ka ọtụtụ n'ime ha yiri ka ha bụ ndị mmụọ ozi, a na-atụle ha n'ụzọ siri ike na 20,000.
Agbanyeghi na enwere ike kewaa otu ndi otu World Mate sei-kai'in 正 会員 ma ọ bụ zuru oke na jun-kai'in 準 会員 ma ọ bụ na-akpakọrịta, nkewa a dị ka ihe na-adịghị mkpa n'etiti ndị na-eso ụzọ na-arụsi ọrụ ike karịa ọdịiche dị n'etiti onye zuru oke, gụnyere ndị otu Angel Angel, na ụdị ọ bụla ọzọ. Nke a bụ n'ụzọ doro anya n'ihi na e nyere ndị mmụọ ozi "ikike," kama "ọrụ," ịrụ ọrụ afọ ofufo maka World Mate dị ka ụdị nke shingyō (omume Chineke) na n'ihi na ha nwere ike ịga ngwa ngwa shinji ezukọta dị ka ezigbo onye so na mpaghara alaka mpaghara. Ndị na-eso ụzọ nkịtị ndị na-esiteghị na alaka ọ bụla nwere ike ịchọta na ọ bụ naanị ha na-enwe obi iru ala iji jiri ọtụtụ awa na-arụ ọrụ shinji mgbakọ. Ndị mmụọ ozi dị oke mkpa ka a họpụta ha dị ka onye dị elu, dị ka shibu-chō na eria-komitti (onye otu kọmitii nke isi obodo).
A na-agbakwa ndị mmụọ ozi ume ka ha gbasi mbọ ike shi 師 ma ọ bụ "nna ukwu," dika kyūrei-shi 救 霊 師, kuzuryū-shi 九 頭 龍 師, na yakuju-shi 薬 寿 師. Karịsịa kyūrei-shi a na-ahụ dịka ndị nna ukwu dị elu, n'ihi na Fukami na-ele ha anya dịka ya anụ-deshi 直 弟子 ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ n'oge. Kyūrei-shi Ọ bụghị nanị na a ga-atụ anya na ndị na-eme nke a ga-ekere òkè na nzukọ ọmụmụ ihe karịsịa maka ha ma mụta ọtụtụ ihe gbasara ụzọ e si arụ ọrụ gūrei n'ebe ahụ kamakwa achọrọ ịzụ onwe ha n'ihi na kyūrei-shi ekwesiri ime ihe omimi nke gūrei (na-azọpụta mmụọ) ihe dịka awa abụọ na-enweghị mmechi. Ọnụ ọgụgụ nke kuzuryū-shi bụ 4,000 na 2003, ọ bụ ezie na ọ nweghị ozi gbasara nọmba nke kyūrei-shi na yakuju-shi dị ugbu a.
N'agbanyeghi na ndi otu ndi otu ndi ozi Angel, enwere otutu ndi na esonyere Angel Angel. Nke a yiri ma ọ bụ ma ọ bụ n'ihi na ndị mmụọ ozi na-etinye oge na ụba ego (n'ụzọ dị mkpa, onyinye n'ekpere, gụnyere mmefu na ihe dị iche iche na ọrụ ndị World Mate na-enye) na-etinye aka na mmemme dị iche iche nke World Mate na / ma ọ bụ n'ihi na ha mkpa ka gi na ndi otu ozo nke otu ulo ozo no. Ọzọkwa, ọbụna ndị nkịtị na-esonyere Angel Angel nwere ike ịnweta ọrụ dịgasị iche iche nke World Mate na-enye, ọ bụ ezie na ha nwere ike inwe obere mmasị na shingyō Fukami ahụ dị ka ihe dị mkpa nye ụmụazụ ya
E wezụga World Mate, Fukami tinyere ma guzobe ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dịka ụlọ ọrụ achụmnta ego, gụnyere Tachibana Publishing na Misuzu Corporation, yana ndị otu na-anaghị akwụ ụgwọ, gụnyere Worldwide Support for Development (WSD), International Shinto Foundation (ISF) , International Foundation for Arts and Culture (IFAC), na Tokyo Art Foundation (TAF), nke International Foundation for Arts and Culture (IFAC). World Mate na-azọrọ na ọ nweghị mmekọrịta ọ bụla ma ọ bụ obere ọrụ nke ọrụ ndị otu a mana oke a ga-ahụta ha kpamkpam na mmemme Fukami na World Mate edoghị anya. Maka ụfọdụ ndị otu ya, itinye aka na ụlọ ọrụ ndị ọzọ yana ọ pụtara nke ọma site n'aka ha (dịka ọmụmaatụ, na WSD na ISF) bụ ihe ịrịba ama nke ọnọdụ ya na ịdị mkpa ya, ma mee ka ha nwekwuo mmasị na njem ya. N'otu oge ahụ, mkpakọrịta ya na òtù dị iche iche, dịka ISF nke o nyeere aka ịmalite, emeela ka nchegbu banyere ọnọdụ ISF na nchegbu ụfọdụ ndị ọkà mmụta na-ekwu banyere njikọ dị n'etiti ISF, Fukami, na World Mate (Antoni 2001) ).
Kemgbe afọ 1990, ndị nkatọ na ndị odeakụkọ gosipụtara ya ugboro ugboro na o doghị anya ma World Mate yana mmekọrịta ego na ụlọ ọrụ azụmaahịa nke Fukami Tōshū ma ọ bụ ndị isi ya na-elekọta. O yiri ka ọ bụ eziokwu na aha mbụ nke World Mate (Cosmo Core, nke na-esote Cosmo Mate) bụ otu ihe ahụ nke ụlọ ọrụ Nihon Shichōkaku-sha. Dị ka ihe atụ, November 5, 1991, akwụkwọ akụkọ ahụ Nikkei Ryūtsū Shimbun akpọ Cosmo Mate dịka "ụlọ ọrụ" nke Fukami haziri dị ka otu òtù mmadụ. Ọzọkwa, dịka World Mate (Handa 2006) si kwuo, otu onye mbụ na-edu ndú na ndị na-akwado ya kwadoro ozi ụgha gbasara ụtụ isi nke ụlọ ọrụ Cosmo Mate na ndị ọrụ ụtụ isi na 2003.
N'ikpeazụ, Ụlọ Ọrụ Ịtụ Ụtụ Ógbè na Tokyo ugboro abụọ tụlere ụlọ ọrụ Cosmo Mate (na Disemba 1993 na March 1994) na-enyo enyo ịghara ịkọ ụtụ isi ego site na ọrụ Cosmo Mate. N'ihi nyocha a, Ogige taxi Ogikubo na Tokyo nyere ntaramahụhụ nke ihe dịka ijeri Ijeri atọ na-ekwu na ego a na-akwụghị aka na May 1996. Ụlọ ọrụ (Nihon Shichōkaku-sha) gọrọ ngọngọ ego ọ bụla na òtù okpukpe (World Mate) ma tinye akwụkwọ a megide onyeisi ụlọ ọrụ taxi Ogikubo wee nweta nkwụghachi ụtụ a na May 2006 na Ụlọikpe Elu Tokyo.
Na agbanyeghị nke a, ụfọdụ ndị odeakụkọ na ndị ọkaiwu nọ na-enyo enyo na azụmaahịa ego nke World Mate na-eduzi. Achọpụtala na ego a na-enweta kwa afọ nke World Mate bụ ihe ruru ijeri yen (Aonuma 2015; Hasegawa 2015) ma ọ bụ ijeri yen iri na abụọ (Ōhira 2016) na ụlọ ọrụ ndị Fukami bụ nnukwu ndị na-ere ngwaahịa na-ewepụta ijeri yen ijeri anọ na mkpokọta ire (Hasegawa 2015) ma ọ bụ yen-ijeri yen (Ōhira 2016). Ka ọ dị ugbu a, Fukami eguzobewo, yana / ma ọ bụ ewerela ọnọdụ ndị isi na, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-abụghị uru (NPOs). Fukami, dị ka onye ntụzi ma ọ bụ onye isi otu otu ndị ahụ, enyela nnukwu onyinye na nzukọ agụmakwụkwọ na mmemme, mmemme ọdịnala na nka, ndị ọrụ ebere, na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a ma ama, ọ haziela ọtụtụ mmemme ọha na eze, egwu, nzukọ, na ihe ngosi. Enwere ike ịpụta site na nke a na ejiri nnukwu ego mepụta ihe ndị a niile. Agbanyeghị, enwere obere ozi a tụkwasịrị obi gbasara oke nke World Mate na ụlọ ọrụ ndị Fukami na-arụ ọrụ ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ ya na-akwado nkwado ọrụ ya nke Fukami na ndị na-akwado ya kwuru na ọ nweghị njikọ na World Mate.
Ọ bụ ezie na Fukami egosiwo mmasị dị ukwuu n'ọtụtụ ọrụ ihe omume, ọmịiko miri emi ya na omenala ndị Japan Eeh arụ ọrụ na-akpata nsogbu maka World Mate. Akwụkwọ akụkọ Tachibana, nke Fukami na-agba, bipụtara magazin bimonthly Shin Nōgaku Jānaru 新 · 能 楽 ジ ャ ー ナ ル (New Journal of Eeh ) site na 2000 ka 2012. Nke a Eeh nyochaa akwụkwọ akụkọ nke mbụ dị ka Nōgaku Jānaru (Journal nke Eeh ) site n'aka obere onye nkwusa Dengei Kikaku si 1994 gaa 1999, mgbe nke ahụ gasịrị, Tachibana bipụtara ya. Na 2001, na Eeh onye nkatọ Ōkouchi Toshiteru tụlere ihe ndabere banyere mgbanwe site na Dengei ruo Tachibana na magazin ahụ psiko. N'akwụkwọ ya, o kwuru na Tachibana nwere njikọ chiri anya na jakyō 邪教 ("okpukpe ụgha"). N'ihi na ọ kpọrọ ya jakyō, bụ okwu a na-ejikarị eme ihe megidere ọtụtụ NRM na Japan n'oge gara aga, World Mate amagbuo ya maka nkwutọ.
Na February 2003, Ụlọikpe District nke Tokyo kpara aka megide World Mate. Ná mkpebi ya ụlọikpe ahụ kpebiri na okwu ahụ bụ jakyō enwere ike iji kọwaa okpukpe ezighi ezi ma ọ bụ okpukpe na-enweghị okwukwe, nakwa na ọ bụghị kpamkpam ịkọwa World Mate na okwu ndị dị otú a, dịka a jakyō. N’ọnwa Ọktọba nke afọ ahụ, World Mate na oukouchi mechara ruo n’otu n’ụlọ ikpe dị na Tokyo. Ka o sina dị, mkpebi ụlọ ikpe nke nta kpọrọ World Mate dị ka “okpukpe ụgha,” isi ihe nke Kitō Masaki, onye bụbu onye ọka iwu defensekouchi, gbasiri ike. O zoro aka na mkpebi ụlọ ikpe dị ka jakyō hanketsu Owuwu edo edo ("okpukpe ugha") na ebe a kpọtụrụ aha na mbụ (lee ngalaba nke malitere na nke mbụ) nke e bipụtara na 2002 site n'aka ndị nta akụkọ na ndị ọkàiwu. Kitō bụ otu n'ime ndị ọkàiwu metụtara ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ a.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị NRM enwewo nsogbu metụtara mkparị na mwakpo mgbasa ozi mgbasa ozi, gụnyere ebubo nke ịbụ "okpukpe ụgha" na obere ihe karịa ụlọ ọrụ na-akpata ego, World Mate nwere ike ịnagide ọtụtụ nsogbu na ọgụ ndị a karịa ọtụtụ ndị NRM ndị ọzọ. Nke a bụ ọkachasị ọ bụghị naanị n'ihi ọrụ azụmahịa Fukami, nke ọ na-ekwu na ọ dị iche na nke ndị okpukpe ya, kamakwa n'ihi na ikpe ụlọ ikpe dịka nke kwadoro iji okwu ahụ eme ihe jakyō n'ihe metụtara World Mate emeela ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ maka ndị nkatọ. Okwu ndị dị otú a emetụtala ọnọdụ World Mate ma bụrụ ihe iyi egwu nye ọkwa ndị otu ya yana ikike ịnabata ndị otu.
Mgbasa ngwa ngwa nke sincentanetị kemgbe ngwụsị-1990s emeela ka ọhụhụ World Mate bawanye n'ime cyberspace ma mepụta nsogbu ọhụrụ maka mmegharị ahụ. O nweela ọtụtụ mwakpo na ntanetị site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị kọwara onwe ha, ndị dị ugbu a na ndị bụbu ndị na-eso ụzọ, bụ ndị na-erite uru na amaghị aha ha na Internet na-enye, na-arụ ụka na megide World Mate na Fukami na Intanet.
Ọtụtụ ndị na-azọrọ na ha bụbu ndị otu World Mate emeela mkpesa na ntanetị na World Mate na Fukami aghọgburu ha. Mwakpo ndị a na-enwe na cyberspace na-anwa mgbe niile igosipụta echiche na-adịghị mma nke ndị na-eso ụzọ World Mate dị ka ndị nọ n'okpuru "njikwa uche". Nzaghachi World Mate na mwakpo ndị a bụ ịsị na ọ na-ata ahụhụ ọtụtụ akwụkwọ enweghị ntọala na ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, n'August 2002, ozugbo Kitō Masaki na ndị ọka iwu ndị ọzọ guzobere weebụsaịtị ahụ ekwuru na mbụ nke na-akatọ mmeghari ahụ, World Mate kesara ndị otu ya akwụkwọ nta aha ya Ọ bụ Kamisama ka konna Tokoro na Oriteiru ! (Ezi Chineke na-agbadata ebe a!), Bụ nke lekwasịrị anya na mkparị na nsogbu ndị World Mate na Fukami chere. N'ime akwụkwọ nta a, Fukami kwuru na mgbasawanye ngwa ngwa nke Intanet agbanweela ọnọdụ ndị dị gburugburu World Mate, ma nyeere ndị na-agbanyeghị ụda ọkụ ọkụ na ebe nrụọrụ weebụ aka ịgbasa dị ka ọkụ ọkụ na-enweghị isi. Ọ gara n'ihu ikwu na, iji chebe ndị òtù ahụ site na nrọ ndị ahụ na-ezighi ezi, World Mate enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịnweta iwu. N'ezie, World Mate amaala ọtụtụ ndị nnọchiteanya na ndị nta akụkọ maka ịgha ụgha. N'ihi nke a, o meela ka a mara aha ya dị ka òtù na-arụ ụka.
N'anya ụfọdụ ndị, Fukami amalitela inwe mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị World Mate, ọkachasị nke iguzobe Gọọmentị Federal World na Japan site na 2020 (yana dịka ụzọ mbido nguzobe nke gọọmentị gọọmentị Asia na Japan tupu afọ 2010), kpalitere nchegbu n'akụkụ ụfọdụ, ọkachasị na ebumnuche ndị a dị ka. iji nwee mmetụta dị ukwuu nke mba ha na, maka ụfọdụ, na-agbanwe agbanwe nke amụma Japan tupu agha. Agbanyeghị, dịka amaara na mbụ, World Mate agbaghaala na ọnọdụ a, agbanyeghị na ọ gara n'ihu igosipụta ịhụ mba n'anya nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-akpali ọgba aghara na mpaghara ụfọdụ.
Kemgbe ngwụcha-2000s World Mate na ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị Fukami na-arụ ma ọ bụ guzobere nyere onyinye buru ibu nye ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ma ama, gụnyere, dị ka ekwuru na mbụ, Shimomura Hakubun. Na 2010, World Mate nyere ndị mmadụ New Party (nde mmadụ atọ) ego yen.Kokumin Shintō), onye nnọchiteanya ya bụ Kamei Shizuka, bụ onye a ma ama nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke jeere ozi dịka Minista maka Financial Services site na September 2009 ruo June 2010. N'ikpeazụ, òtù ahụ ghọrọ onye nke ise kasị enye onyinye (na onye kasị ukwuu n'etiti òtù okpukpe) gaa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị na-eri nri na 2010. N'oge ahụ Kamei bụ onye ndụmọdụ na BC Consulting, ụlọ ọrụ Fukami na-agba ọsọ.
Onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke World Mate nyere onyinye dị ukwuu bụ Ozawa Ichirō, onye ngalaba-nchoputa na onye nnọchi anya nke Ndị Life Life Party (Seikatsu no Tō). Ozawa bụ otu n'ime ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị ama ama na Japan, na ego ọ na-enweta kwa afọ bụ nke kachasị n'etiti ndị isi otu maka afọ atọ na-esote site na 2012 ruo 2014. World Mate yiri ka ọ bụ isi iyi ego maka ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya n'oge ahụ. . Dị ka Kamei, Ozawa natara ụgwọ ndụmọdụ site na BC Consulting (dika Mainichi Shimbun July 2, 2012, mbipụta nke mgbede), ebe World Mate nyere nnukwu onyinye na nzukọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya na Party Life Party.
Fukami ekwusiri ike na obughi nani inye onyinye ndi ochichi kamakwa inwe nzuko ndi kariri elu nke na-acho onu ogugu ndi a ma ama nke uwa. Dịka ọmụmaatụ, Nzukọ Ndị Isi Na-ahụ Maka Mgbasaozi Ụwa, nke Worldwide Support for Development (WSD) kwadoro, onye onyeisi oche ya bụ Fukami, mere ugboro atọ na 2013 na 2014. Tony Blair (kpọrọ ugboro abụọ), Bill Clinton, Colin Powell, John Howard (onye bụbu Prime Minista Australia), Fidel Valdez Ramos (onye bụbu onye Filipaị), a kpọkwara mmadụ iri na abụọ ndị ọzọ a ma ama na ogbako ụwa a, ebe Fukami jere ozi dika onye nhazi ya.
Ọzọkwa, a na-akpọkarị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-asọ oyi na Japan ka ha gaa na mmemme ndị NPOs haziri nke na-enweghị ihe jikọrọ ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, dị ka ngosi ngosi nka nke Tokyo Art Foundation kwadoro. Ndị otu ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama gụnyere Kamei, Ozawa, Hatoyama Yukio (onye bụbu Prime Minister), na nwanne ya nwoke bụ Hatoyama Kunio (onye bụkwa onye ndụmọdụ nke BC Consulting na onye nwụrụ na 2016) , ndị ha nile bụbu ndị Diet so na Liberal Democratic Party. Ya mere Fukami etinyela isi ike na ịzụlite ikike ya n'etiti ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọghị mgbanwe. Suchdị njikọ a na inye onyinye ego nye ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọghị mgbanwe, yana ndị otu a na-ahụ maka mkpakọrịta na ịhụ mba n'anya, na-enyo ndị na-emegide usoro ahụ enyo, na-agbakwunye na nsogbu ọhaneze nwere nsogbu.
Ọtụtụ ndị otu World Mate na-echegbu onwe ha gbasara onye ga - anọchi Fukami, maka na ọ lụbeghị nwanyị ma ọ nweghị ụmụ. Na 2010, ada Tsugamura Shigerō, onye buru ụzọ bụrụ onye nnọchi anya World Mate, lụrụ nwanne nwoke nke Fukami. Somefọdụ na-atụ anya na ọ ga-anọchi Fukami dị ka onye isi nke World Mate ebe ndị ọzọ na-ekwu na World Mate agaghị adịgide ndụ na-enweghị mmụọ na-adọrọ adọrọ nke Fukami. Ọ dị ka Fukami n'onwe ya ekwupụtabeghị nkwupụta gọọmentị banyere onye ga-anọchi ya. Okwu a ga - abụ ihe ịma aka dị mkpa maka njem ahụ ogologo oge.
Image #1: Foto nke Fukami Tōshū, onye natara World Mate.
Image # 2: Foto nke akwụkwọ a ma ama nke Toshu Fukami, Lucky Fortune.
Image #3: Foto nke ụlọ nsọ Srop-ōkami On-yashir na Shizuoka Prefecture na-eje ozi dịka isi ụlọ ọrụ World Mate.
* Cheta: Ụfọdụ n'ime ihe ọmụma dị na profaịlụ a na-enweta site na nchọpụta m na-emekarị site na 2001 ka 2003 na site na nchịkọta PhD m: Kawakami, Tsuneo. 2008. "Akụkọ banyere ntọghata na ntinye aka na New Movements Religion: Ndị ikpe nke usoro mgbakwasị Hikari, World Mate, na Kōfuku no Kagaku.."Lancaster University, UK
Antoni, Klaus. 2001. "Nyochaa: Shinto na History: Ụzọ nke Kami. " Akwụkwọ Japanese Studies 27: 405-09.
Aonuma, Yōichirō. 2015. "Mgbochi Megido Megido Gọoso Fukami Tọshū." G2 18: 184-209.
Fukami, Toshu. 1987. Mee Onwe Gị Nkwa. Tokyo: Tachibana. Nsụgharị Bekee: 1997.
Fukami, Tọshū. 2002. Shinbutsu no Kotoga Wakaru Hon. Tokyo: Tachibana.
Fukami, Toshu. 1986a. Ike Chineke. Tokyo: Tachibana. Nsụgharị Bekee: 1998.
Fukami, Toshu. 1986b. Onu Ochioma . Tokyo: Tachibana. Nsụgharị Bekee: 1998.
Fukami Toshu. 1986c. Ụwa nke Chineke. Tokyo: Tachibana. Nsụgharị Bekee: 1997.
Fukami, Tọshū. "Anime Songu to Nandemo Bōdāresu Ni Natta Ikisatsu" Nweta site http://www.worldmate.or.jp/about/column.html na 26 August 2016.
Handa, Haruhisa. 2006. "Oshirase." Nabatara na http://www.worldmate.or.jp/faq/answer13.html na 26 August 2016.
Hasegawa, Manabu. 2015. "Shimatara nke Yatara Menitsuku Nazo No Otoko: Fukami Tōshū." Shūa Gendai 57: 162-66.
Isozaki, Kwadoro. 1991. Fukami Seizan. Tokyo: Keibunsha.
Kisala, Robert A. 1994. "Conmatem Karma: Nkọwapụta Karma na Tenrikyō na Risshou." Akwụkwọ bụ Japanese Journal of Studies Religious 21: 73-91.
Ohara, Kazuhiro. 1992. Naze Hito wa Kami lee Motomerunoka. Tokyo: Sh u densha.
Ohira, Makoto. 2016. "Tinye Odoru Kyōso No Kareina Kane ka Jinmyaku." AERA 29: 24-25.
Yonemoto, Kazuhiro. 1993. "Rein ō sha Fukami Seizan no Sugao Wa'aruku Yō chien '?" Takarajima 30: 34-50.